Ndi igwe eji agba belt kwesiri ya? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Belt drive na-agagharị igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Belt drive na-agagharị igwe kwụ otu ebe - otu esi edozi
Ndi igwe eji agba belt kwesiri ya?
Belt draịvadị elu karịa agbụdraịvan'ọtụtụ akụkụ. Ha dị mfe ihicha ma debe, na-adịru ogologo oge, ma dị jụụ ma dịkwa nro karịa. Agbanyeghị, ha dịkwa oke ọnụ, nke na-ewelite ọnụ ahịa niile nkeanyịnya igwendị ha ha ike.
Anọ m na-anya ụgbọala draịva na kọntinent ọ bụla kemgbe 2010 na mgbe ihe karịrị 100,000 kilomita na mba 100 adị m njikere ịgwa gị na ọ nweghị njem ka mma, ịgba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ịkwaga njem. Enwere m eriri site n'ọzara kachasị mma, n'ime ogige snow na-ekpo ọkụ, site n'oké ọhịa, n'akụkụ ụsọ mmiri, n'okporo ụzọ apịtị na elu nke ụzọ kachasị elu n'ụwa. Echere m na mmadụ ole na ole nọ n'ụwa nwere otu ụdị ahụmịhe ụwa dịka m.
N'isiokwu a, anyị lebara anya n'ihe draịvụ belt bụ, ihe uru na ọghọm dị na ya, mgbe ahụ m ga-agabiga ajụjụ a na-ajụkarị iji jide n'aka na ọ nweghị nkume a hapụrụ ahapụ. Oh na nke a abụghị akwụkwọ nkwado, etinyeghị m ego na ụlọ ọrụ ndị na-agba belt ma enwere m ike iji ụdọ igwe kwụ otu ebe n'oge ọ bụla. Abụ m naanị nnukwu onye na-akwado bel na enwere m olileanya na ị ga-ahụ ihe kpatara n'oge na-adịghị anya.
Ya mere, gịnị bụ eriri ụgbọala? A na-eji eriri eme ihe iji mee ka ndị na - akwado igwe ịnyịnya nke 10,000 na - agba ịnyịnya nke draịva ịnyịnya nke 150 - na, na nso nso a, ụgbọala nke ọtụtụ ịnyịnya ígwè. Ateslọ ọrụ Gates mepụtara ihe mbụ ha na-arụ na ụgbọ ala n'ihe dị ka otu narị afọ gara aga, taa ha bụ akara belt kachasị mma maka ịnyịnya ígwè. Eriri n'onwe ha ka ejiri polymer mesikwuru ọtụtụ eriri carbon.
Ha na-ahụ na-ahụkarị na igwe anaghị agba nchara Kwadobe na inogide aluminum yinye. Kedu ihe kpatara m ji chee na eriri akwa bụ ụgbọ oloko kacha mma? Nke mbu, eriri igwe nwere ogologo ndu. Nwere ike ịtụ anya na eriri eriri ga-adịru atọ ruo ugboro anọ karịa otu agbụ.
Nke ahụ karịrị kilomita 30,000, ọbụlagodi ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dara ogbenye nke a na-atụkarị m na ya! Na mgbakwunye, ha enweghị mmetụta na mmiri na nnu, nke mere na enweghị nchara ebe a ọbụlagodi ọnwa ole na ole nke ịgba ịnyịnya ígwè site na oge mmiri ozuzo siri ike. Nọmba abụọ bụ na eriri chọrọ obere ka ọ ghara mmezi. Belts adịghị agbatị, achọghị mmanu mmanu, anaghị ete mmanụ, ma tufuo sludge n'ụzọ dị ịtụnanya.
Igwu mmiri na-abụkarị ihe na-egbochi ha ịga. Nọmba nke atọ, eriri draịva enweghị mkpọtụ. Know ma mgbe ejirila siliki gị mee mmanụ ọhụrụ ma na - agba agba nkịtị? Ọfọn, nke ahụ mara mma oge niile! Nọmba nke anọ, eriri dị ọkụ karịa agbụ.
biking kalori counter
Nwere ike ịdabere na ịchekwa ibu dị n'etiti gram 100 na 300 ma e jiri ya tụnyere agbụ ígwè. Ọganihu ndị ahụ adịghị mma, mana gịnị banyere ọghọm? Nke mbụ, ịnweghị ike iji draịva belt na derailleurs. Emere ájị̀ na-agba n’usoro zuru oke.
Nke ahụ pụtara na enweghị ike ijikọ ya na derailleurs, chainring ma ọ bụ cassettes, mana enwere ike iji ya na gearbox na crankset ma ọ bụ gia na wheel azụ. Number abụọ, ị chọrọ eriri dakọtara etiti! Ebe ọ bụ na eriri na-abụkarị otu, a ga-enwerịrị etiti gị na belt splitter na azụ ka ị wee nwee ike itinye eriri na igwe kwụ otu ebe. Eku ahụ ga-enwerịrị 'nnwale siri ike' iji hụ na okpokoro ahụ adịghị agbatị oke ma eriri ahụ na-apụ n'azụ azụ.
Number atọ, nnọchi akụkụ na-ahụghị na-ahụkarị igwe kwụ otu ebe ụlọ ahịa. Onwe m, ahụtụbeghị nke a dị ka nsogbu, zụta akụkụ m niile na-echekwa ma na-enwekarị eriri aka m mgbe niile. M na-agakarị ọnwa 18 tupu m chee maka ịtụ akụkụ.
Nọmba nke anọ, enwere ụgwọ dị elu karịa. Eltgbọ Abelt ahụ adịghị ọnụ ala, mana ọ bara uru, ma ọ bụrụhaala na ị ga-ewepụ ihe mgbochi gị. Echere m na ị ga-aga kilomita 125 maka dollar.
Nke a bụ otu silisi silin nke ga-efu gị ihe ruru $ 60 kwa kilomita 7,500. Maka nkọwa, nke ahụ bụ otu ọnụahịa dịka ogologo oge na-adịgide adịgide anyị nwere, nke na-ebu n'etiti 5,000 na 7,000 kilomita. Na ọnụ ọgụgụ 5, ọ bụ obere ọrụ ike dị mma.
Site na mkpụmkpụ nke na-ebufe ihe niile dị n'agbata 95 na 98 pasent, ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ ụgbọ oloko kachasị arụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ị ga-eji nnyefe na igwe kwụ otu ebe na eriri, enwere mwakpo esemokwu ọzọ. Dabere na data dịịrị anyị, Shimano hubs na Pinion gia dị ntakịrị karịa 90 pasent arụmọrụ, ebe ụlọ ọrụ Rohloff na-abawanye ruo ihe karịrị 94 pasent.
Ikike ịrụ ọrụ nke ọma bụ otu n’ime ihe ndị mere na ị naghị ahụkarị ngwa ngwa na eriri draịva n’ọsọ ịgba ịnyịnya. Mgbakwunye ndị ọzọ nwekwara ike ime na eriri ahụ, mana nke a dị obere karịa nke gearbox n'onwe ya. Ugbu a, anyị abịarutela ajụjụ niile a na-ajụkarị gbasara draịva.
Kedu ihe Gates Carbon Drive na-adị? Ọ na-anya dị ka agbụ dị mma, mana o nwere igwe dịtụ iche. Na agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị, ọ na-adị ka siri ike ma sie ike dị ka agbụ. Kedu otu esi edozi bel? Ọ dị mfe iwepu eriri igwe na nsọtụ nke ụzọ.
Belts, n’aka nke ọzọ, emepụtara ka edochie ya. Kama iburu agbụ ígwè, ọ ga-adị mma ibute eriri na-agbanwe agbanwe nke ga-aha n ’otu obere nha. M naanị agbajiri 19,000 kilomita nke eriri ochie na afọ 10 gara aga, ya mere ịgbanwe belt mberede anaghị abịa n'uche.
Kedu mgbe ị mara na eriri akwọla nká? N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ngwongwo azụ nke na-ebu ngwa ngwa ngwa ngwa na eriri ụgbọala, ezé nwere ike ịdị oke nkọ! Ebe ọ bụ na enwere m ntakịrị ọrụ, m gbanwere ụgbọala m niile dịka ihe ga - eme ka ihe dị ka kilomita 30,000 gasịrị. Achọpụtabeghị m ezigbo njedebe ebe eriri ndị ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ, mana ọ dị ka ndụ abawanyewo ka Gates webatara igwe eji agba igwe ọhụrụ n’izu a! Kedu ihe dị na mgbochi belt? O nwere ike ịbụ na ị hụla isiokwu ndị mmadụ na-atụkọta ihe dị arọ na pedal iji gosi ọdịiche dị na nkwụsi ike mbanye n'etiti eriri na yinye. Ule ndị a bụ ntakịrị ihe na-eduhie eduhie n'ihi na eriri na esemokwu belt na-abawanye n'ọtụtụ dị iche iche - eriri belt bụ n'ezie okpukpu anọ dị obere.
E nwere oge mgbanwe ebe eriri na-arụ ọrụ nke ọma karịa agbụ mgbe ị na-agba ụkwụ na narị abụọ na iri na abụọ watts. Nke a dị ntakịrị elu karịa ịgba ọsọ ụkwụ ọsọ, yabụ na-atụ anya ihe dịka ọkara watt slack na sistemụ belt n'okpuru ọnọdụ ịkwọ ụgbọala dị mma, mana o yikarịrị ka ọ dị mma ịrụ ọrụ n'ọnọdụ ọjọọ n'ihi otu eriri nwere ike wepu unyi na gia. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-eji etiti siri ike karị, ị nwere ike belata esemokwu belt n'okpuru nkwanye.
Anụbeghị m, mana m ji nwayọ na-ebelata eriri eriri na Koga m n'afọ gara aga ma n'eziokwu ọ na-akwa emo. My belt nwere ike ugbu a na-emetụ m yinye ịnọ, ọ dị nnọọ elu karịa nke kacha nta na m nwere ike ghara tụrụ ya! Ma abụ m onye ọkwọ ụgbọ ala siri ike, nke nwere oke ibu dị arọ na-ebugharị n'okporo ụzọ ugwu ugwu dị egwu. N'ihe m na-eme nke ọma na ike m na-agbanye, eriri m na-agba ọsọ ma ọ bụ obere esemokwu karịa agbụ.
Naanị m na-akwado ịnwale nke a na eriri belt, nke ga-eme ka eriri ahụ nọrọ ọdụ ọbụlagodi na eriri ahụ na-agba ọsọ. Kedu ihe mmezi ahụ dị ka ya? Mgbe ị na-agbagharị n'ọnọdụ ndị na-adịghị mma, ọ bụ ezi echiche iji brọsh ịsa ezé na mmiri iji wepụ irighiri ihe ọ bụla na sistemụ - ọ bụrụ naanị iwelata eyi gị. Na ọnọdụ akọrọ nke nwere uzuzu dị mma, draịva belt nwere ike ibute mkpọtụ na-akpasu iwe mgbe ụfọdụ.
Enwere ike idozi nke a site na iji silicone spray nke na-ata ozugbo na belt gị. Ana m anwale ugbu a na teknụzụ silicone lube, nke na-adị ntakịrị mmiri ma na-adọta ájá karịa n'oge dị mkpirikpi, mana ọ dị ka ọ chọrọ obere ojiji. A maara Rohloff biodegradable chain lubricant na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ.
Naanị chefuo banyere pen pen na-elekọta pen, ọ dị oke nnyapade na hoo haa na ngwaahịa dị egwu maka eriri. Otu esi edozi mgbatị Belt N'adịghị ka agbụ, eriri anaghị agbatị oge, na-ebute ezi set ma na-echefu drivetrain. Enwere ụzọ abụọ dị iche iche iji dozie esemokwu ahụ na eriri.
Fọdụ igwe kwụ otu ebe na - eji ndị na - eme njem azụ azụ, mana mgbe ị na - agwa ndị injinia igwe kwụ otu ebe okwu, ọ dị ka okpokoro okirikiri eccentric na - enye ohere maka triangle azụ siri ike ga - agba ọsọ iji nwee esemokwu belt kachasị ala. Nwere ike iji ekwentị gị chọpụta esemokwu nke eriri gị. Site n'iwepu eriri ahụ, ngwa ekwentị gị na-ewepụta oge ọgbaghara ma chọpụta ma esemokwu eriri gị ọ dị mma.
Dịka ị pụrụ ịhụ, eriri ukwu m dara n’okpuru ebe mgbati ugboro ya. Mana ọ bụrụ na anyị mee ka ihe niile sie ike, anyị nwere ike ịgụ. Ọ bụ na eriri ebibi biarin? Enwere ike ịnyịnya ígwè nwere eriri n'ikike kachasị na eriri beliti nwere ike mebie ebe a na-agba mbọ.
Ma na igwe kwụ otu ebe e mere maka eriri, etiti ahụ siri ike maka esemokwu iji kwekọọ na nke onye na-agba ịnyịnya na-eji agbụ na ịdegharị na watts 250, nke na-abụghị ihe ọhụrụ. Enweghị oke ọnụọgụ gia? Enwere akuku azu anọ, nha nha anọ na ogologo eriri iri abụọ ịhọrọ. Nke a agaghị abụ mmachi maka njegharị na njem.
Nwere ike ịtụgharị etiti maka draịva? Ewegara m okpokoro abụọ na-agagharị agagharị na onye na-ewu ihe owuwu iji mee ka oghere ndị dị n’azụ wuru n’ime triangle azụ. Ha na-arụ ọrụ nke ọma, mana m ga-eji esemokwu dị elu dị ka azụ triangles nwere ọtụtụ akụkụ akụkụ na akụkụ karịa eriri eriri raara onwe ya nye. Enwere ndị ọzọ na-emepụta belt? Gates na-achịkwa ahịa kpamkpam ma a bịa n'ihe banyere eriri draịva, mana enwere ndị nrụpụta ole na ole na-enye ndị ọzọ gụnyere Veer, Accord na Driveline.
Veer dị ka ọ kachasị nwee nkwa ma nwee nnukwu uru karịa Gates - eriri ha nwere ike kewaa, nke pụtara na ha nwere ike itinye na igwe kwụ otu ebe! Ebe ọ bụ na emeghị ka azụ nke ụdị igwe a na-ahụkarị ka ọ bụrụ nke siri ike, echere m na usoro Veer nwere esemokwu dị elu mgbe ọ na-agbanwe igwe. Mana nke ahụ pụtara na ị ka na-enweta uru niile nke eriri ụgbọala, yabụ echere m na ọ bụ ngwaahịa dị jụụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịmata ihe na-achọghị igwe kwụ otu ebe kpamkpam. Ka anyị chịkọta ihe ahụ! Enwere m olileanya na ozi a dakwasịrị ụdị okwu niile dị na eriri.
Anọ m na-akwọ ụgbọala na-adọkpụ site na ndị na-agba ọsọ ma na-akpọga ha ebe kachasị dịpụrụ adịpụ n'ụwa maka afọ 10, echekwara m na ọ nweghị ụzọ ka mma maka ịgagharị, ịnyagharị, na njem. Ọ bụrụ na echiche nke usoro gia dị ka Rohloff ma ọ bụ Pinion kwenyesiri gị ike, jide n'aka na ị gafere usoro nhọrọ ma jikọta ya na eriri belt. Ha na-adịgide adịgide, na-anaghị akwụ ụgwọ, ọkụ na jụụ ịkwọ ụgbọala.
Can nwere ike ịkwado ọdịnaya a na Patreon, ị nwere ike iso m @ cyclingabout na Instagram na Facebook, gụọ Bikepacking Bike Buyer's Guide na Touring Bicycle Buyer's Guide, chọpụta ihe ndị dị jụụ na CyclingAbout.com, hapụ okwu n'okpuru na nke a bụ ihe ịma aka - mee ka m kwenye na agbụ dị mma karịa eriri!
Trek na-eme igwe eji agba ịnyịnya ígwè?
Yabụ, mgbe m hụrụ ọhụụMee njemDistrict na Soho, echere m ozugbo 'EGO EGO.'Mee njemagabigala Mavericky niile na anyị wee tụfuo agbụ dị ebe niile maka eriri carbon ọhụrụbelt na-akwalisistemụ na abụọanyịnya igwe. Dabere na weebụsaịtị ha, “Ndịeriri ụgbọala bụihe mejupụtara carbonbeltmesikwuru iji gbochie ịgbatị.Bọchị 2 2009
Ime igwe eji agba ịnyịnya ígwè nwere gia?
.B.eriri ụgbọalabụ ẹge ọ dụdu ezebelt. Ọ na-esite na teknụzụ n'ụgbọ ala na mmepe ọgba tum tum. Nke abeltna-eji nke dị n'imegearingna-ekwe ka ọtụtụ akụkụ na-akpụ akpụ chebe. Usoro mgbanwe a makaanyịnya igwenwere ike ime ka ha bụrụ ndị na-adịgide adịgide ma dị jụụ karịa agbụ ígwè.3 jul. Dec 2019
Nwere ike itinye ebe a na-agba Rohloff na igwe kwụ otu ebe ọ bụla?
Isi ihe mere m ji hapụ idekọta ndepụta a bụ naHlọ ọrụ Rohloff nwere ikea ga-eweghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụọ bụla igwe kwụ otu ebe- ya mereịnyịnya ígwè ọ bụla nwere ikenyochawa bụrụ aRohloff igwe kwụ otu ebe! E nwere ọtụtụ ụzọ erughị ala yinye, jikwaa Gịnị ma ọ bụ meere ndịehiwen'imeọ bụlaetiti. Nke ahụ kwuru, raara onwe ya nyeRohloff igwe kwụ otu ebedị mma nke ukwuu inwe.Dec. 31 2020
Dị ka ị maara, abụ m nnukwu onye ofufe gia draịva. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem m niile gburugburu ụwa na-enweghị mkpanaka ma ọ bụ agbụ. Mana duel dị n'etiti nhọrọ abụọ kachasị ewu ewu, ụlọ Rohloff na Pinion gearbox, kedu nke na-emeri? Nke a nwere ike bụrụ nyocha miri emi nke usoro ịnyefe igwe a na ịntanetị, mana ị tụrụ anya ihe ọ bụla ọzọ? Anyị ga-enyocha njirisi dị iche iche 18 iji chọpụta otu oge na nke niile bụ nnyefe igwe kachasị.
Aga m elekwasị anya na ụdị ọsọ 18 nke Pinion nnyefe maka ntụnyere a, mana ọ bara uru ịmara na ị nwere ike nweta ha na nsụgharị 6-, 9-, na 12. Number otu: wara wara ebe. Geardị igwe gị na-ekpebi ọsọ ị ga - agba n’igwe gị.
Mpaghara gia na-enye anyị echiche banyere otu ọ ga-esi dị mfe ịrị ugwu, ịzọ ụgbọ elu, ma ọ bụ ma ị ga-enwerịrị usoro gia iji kwatuo. ARohloff nwere ọnụọgụ dị elu nke 526 pasent, ebe pinion na-enye 636 pasent - nke kachasị ukwuu nke igwe kwụ otu ebe. Site na oghere Rohloff nke nwere obere gia, ị nwere ike iji nkasi obi gbagoo ugwu na 5 kilomita kwa elekere na akụrụngwa kacha ala.
Ọ bụrụ na ịgbanwee n ’ụgbọ elu kachasị elu, ịnwere ike iru kilomita iri anọ na ise kwa elekere. Pinion gearbox na mgbakwunye ya 21% gia na-eme ka o doo anya na 21% karịa ọsọ ọsọ, yabụ ị ka nwere ike ịdabere na 54 km / h. Nọmba abụọ: gia.
Pinion gearbox na ụlọ Rohloff nwere ngwa ngwa nke 11.5% na 13.6%.
Zọ kachasị mma iji ghọta ihe ọnụọgụgụ ndị a pụtara bụ ịtụgharị ha na nzuzo, nke bụ ọnụọgụ mgbanwe nke crank gị na-eme kwa nkeji. Ka ị na-agbanwe mgbatị na igwe gị, ike gị ga-adị ọsọsọ ma ọ bụ nwayọ nwayọ na ntụgharị nke ọ bụla. Dị ka o kwesịrị, anyị chọrọ mgbanwe mgbanwe ihu igwe pere mpe n'ihi na nke a na-enye anyị ohere ijigide usoro ndụ anyị na-enweghị nnukwu mgbanwe na ọsọ.
Site na ihe omimi nke 9 rpm na mgbanwe ọ bụla, Pinion gearbox dị mma dị ka ọ na-enweta maka ịnyịnya ígwè na ọtụtụ dịgasị iche. Site na ebe a na-ahụ maka Rohloff, ọ na-esitụrụ ike ịchọta ihu igwe zuru oke n'ihi na ọdịiche dị iche mgbe mgbanwe dị na 11 rpm. Maka ntughari, draịtọ 2x11 na-enye ihe gbasara 10 RPM iche na 1x12 drivetrain nwere 13 RPM iche.
Nọmba 3: ịchụpụ arụmọrụ. Anyị na-agba ọsọ nyocha ụlọ iji chọpụta ókè ike gị na-efunahụ dị ka ụgbọ oloko dị iche iche. Site na arụmọrụ nke 94.5 pasent gafee ihe niile, Rohloff hub bụ ihe kachasị mma na ahịa.
Pinion ka nwere ọnụọgụ ole na ole na sistemụ ahụ, na-enwe nkezi nke 90.5 percent. N'ihe banyere nnyefe Pinion, ọ na-aga n'ekwughị na nnukwu akara akara crankshaft, ngwa ngwa n'ime ụlọ, obere ịda ụda n'ihu, na ọsọ ọsọ ọsọ bụ ihe kachasị akpata esemokwu ahụ.
Nọmba nke anọ: ibu ibu. Rohloffhub gbara otu kilogram ọkụ karịa Pinion Gearbox. Ogige ahụ na ihe ndị metụtara ya dị ihe dịka gram 700, mana ọ dịkwa ihe dịka gram 300 nke ihe mgbakwunye dị mkpa iji nweta Pinion Gearbox.
Nọmba 5: mkpọtụ. Ebe a na-ahụ maka Rohloff bụ mkpọtụ mkpọtụ n'ụfọdụ n'ime ngwa ọrụ ya, ọkachasị na nso nso 7th. Nọmba 6: belata na ọnụego.
Nnukwu nnabata ga-ekpebi ngwa ngwa draịntị gị na-arụ mgbe ịmalitere. N’ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, ị ga-ahụ otu obere kụrụ aka mgbe ị na-amanye ụkwụ na pedal nke na-etinyekarị usoro pawl n’azụ gị. O doro anya, anyị chọrọ njikọ aka ozugbo, mana ụlọ ọrụ na-enyekarị ihe ntinye aka 24 na 36 maka ntụgharị ọhụụ ọ bụla.
Rohloff na Pinion nwere nọmba ntinye aka dị iche iche dabere na gia ahọrọ. The Rohloff nwere ọtụtụ ihe nke njikọ aka nke abụọ, n'etiti 16 na 54, ebe Pinion nwere n'etiti 14 na 22. Mana Pinion gearbox kwesịkwara igbachi na azụ azụ mgbe ị na-agagharị, yabụ nke kachasị ịchọrọ ogige nke kachasị meshing ihe kwere omume iwelata drivetrain slump.
Onyxhub na-enweta asọmpi a site na ntinye aka otu ụzọ njigide ngwa ngwa, Hey, ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịnaya nke teknụzụ m, jide n'aka na ị ga-ejide otu Ntinye Ntugharị nke TouringBicycle ma ọ bụ Ntuziaka Bikepacking Bikepacking! Ha abụọ ga-akụziri gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere igwe kwụ otu ebe tupu ị nwee ike iji igwe kwụ otu narị na iri ise + na njedebe nke akwụkwọ ahụ. Ọ na-emelite kwa afọ n'efu! Ọfọn, ka anyị gụọ ọnụọgụ asaa: ịgbanwee. Mgbe ị gbanwere gia na Rohloffshifter, enwere ọkwa dị iche iche nke mgbanwe ntụgharị mgbe ị tinyere ngalaba gia dị iche iche.
Ihe nkedo Pinion gia nwere ngbanwe di nfe karie ihe nile, nke n’eme ka oru di obere uto. Nọmba asatọ: mgbanwe mmanụ. Usoro ntinye abụọ a na - arụ ọrụ n’ime bat ịsa akara ma ị ga - agbanwe mmanụ a oge niile.
Ọ bụ ọrụ dị mfe ị nwere ike ịrụ naanị gị, ọ gaghị ewe gị ihe karịrị nkeji iri. Pinion chọrọ ka ị gbanwee mmanụ kwa kilomita 10,000 site na igwe kwụ otu ebe, ebe Rohloff chọrọ kilomita 5,000. Number itoolu: price.
Ọ bụ ezie na sistemụ nnyefe abụọ ahụ dị oke ọnụ, nnyefe Pinion dị n'aka nhọrọ nnyefe kachasị dị oke ọnụ. Ihe dị iche ọnụahịa dị ntakịrị dị iche n'etiti ndị nrụpụta, mana igwegharị Rohloff na-adịkarị n'etiti 600 na 1,000 euro dị ọnụ ala karịa maka otu usoro igwe kwụ otu ebe. Nọmba 10: Oge Ntugharị Ngwaahịa.
N'ime ihe karịrị afọ 20 na mmepụta, Rohloff nwere oge buru ibu iji wepụ kinks ọ bụla na ngwaahịa ya. N'iji ya tụnyere, Pinion gearbox bụ nnekwu ọkụ na-awụlikwa elu nwere ihe dị ka afọ asatọ nke mmepụta. Ọ bụ ezie na nke a abụghị njedebe doro anya nke mmezi ngwaahịa, eziokwu ahụ bụ na ndị mmadụ nwere ike ịga njem dị anya site na ụlọ ọrụ Rohloff so na mmepe ngwaahịa ahụ.
Number iri na otu: nkwa. Enwere nkwa afọ ise na Pinion gearbox na nkwa afọ abụọ na ụlọ Rohloff. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na enwere mmejọ, ọ dị mfe iji dochie ntụtụ karịa ịkwatu ma wughachi igwe kwụ otu ebe ọhụrụ Rohloff.
Number iri na abuo: retrofitting na mgbanwe. Ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Rohloff anaghị achọ etiti a haziri ahazi, enwere ngwa nkwụnye ọkụ dịnụ ka oghere ahụ wee dabara ihe ọ bụla igwe kwụ otu ebe. Nke a na-eme ka ha zuo oke zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụgbọ ala ụgbọ ala na-adịghị ala.
I nwekwara ike inwe naanị otu ebe a na-agbanye Rohloff nke na-agbanwe n'etiti igwe kwụ otu ebe. Eji m otu n'ime ụlọ ọrụ m Rohloff rụọ ụlọ dị iche iche atọ! Nọmba iri na atọ: WheelSwaps. Ọtụtụ ịnyịnya ígwè nke oge a nwere ikike ịnya ọtụtụ nha ụkwụ.
Ugboro abuba-abuba bu ihe omuma atu zuru oke, o nwere ike iru 26x4.0 ', 27.5x3.0' na 29x2.2 'na igwe eletrik.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe kwụ otu ebe, ịnwere ike iji Piniongearbox ma nwee ụkwụ abụọ ma ọ bụ atọ dị iche iche ị gbanwere dabere na mbara ala. N'iji ya tụnyere, ị ga-achọ ọtụtụ ụlọ ọrụ Rohloff iji nye otu ụdị ọrụ ahụ! Number iri na anọ: ugwu igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji gearbox maka igwe kwụ otu ebe na ugwu, ịchọrọ Pinion.
A crank dabeere na nnyefe na-eme ka ihe kasị nwee uche. Site centralized arọ na igwe kwụ otu ebe na mbenata unsprung uka na azụ wheel, ị nwere ike melite n'ozuzu nkwusioru arụmọrụ na-akwọ ụgbọala Ọnọdụ nke bike. Tụkwasị na nke ahụ, nnyefe Pinion na-eji obere agbụ ígwè n'ihu nke na-enyekwu nwechapụ ala site na nkume na mgbọrọgwụ.
Number iri na ise: ibugo onu-a-igwe kwụ otu ebe. Site na oghere Rohloff, esemokwu dị n'etiti akara hub na ụkwụ azụ. N'ihi ya, ị ga-ahụ na cranks gị na-atụgharị ka ị na-agba ịnyịnya ígwè gị.
Nke a nwere ike itinye gị pedals na a nnọọ iru ala ọnọdụ mgbe ụgbọala na warara erukwa, otú Pinion bụ maa mma nhọrọ ebe a. Nọmba 16: igwe eletrik. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe ịnyịnya ígwè kachasị elu na-eji motọ ụgbọala na-agbagharị ma enwere arụmụka dị mma maka ntọala a.
Karịsịa na steepụ inclines, ebe moto nwere ike iji onye ọ bụla nke gị Kwadobe na-ebuli torque na otú batrị nso. Ebe ọ bụ na Piniongearbox na-ewere ọnọdụ nke igwe eletriki igwe eletrik, ebe a na-ahụkarị Rohloff na-abụkarị igwe eletrik na-aga. Rohloff na-enye ndị na-agba ọsọ ntụgharị Bosch nke na-agwa moto ahụ ka ọ belata nrụpụta nrụpụta mgbe ọ na-agbanwe, na-ebute mgbanwe ngbanwe kachasị mma nke igwe eletrik ọ bụla.
Nọmba 17: Mgbanwe USB. Ngwunye Pinion yiri ka ike na-agwụkarị ngwa ngwa karịa eriri Rohloff, mana iji ụbọchị ọ bụla ị ga-enweta ma ọ dịkarịa ala otu afọ nke eriri abụọ. Gbanwe eriri ntụgharị bụ usoro dị mfe karị na oghere Rohloff, nke egosiri na isiokwu nkuzi, nke bụ ihe dị ka ọkara.
Nọmba 18: mpempe akwụkwọ gafere. Ma sprocket na Rohloff ehiwe nwere a ighikota adịgide nke m hụrụ n'anya, ma e nwere ndị retrofit mgbanwe levers dị kwa. N'ihe banyere nhọrọ Rohloff, Cinq na-eme ka ndị na-agbanwe mmiri na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ndị na-agbanwe agbanwe maka flatbars.
Gebla na-eme Rohbox, sistemụ na-agbanwe agbanwe nke na-enye gị ohere iji 11-ọsọ SRAM ma ọ bụ Campagnolo na-agbanwe ịgbanwe Rohloff na-agbanwe. N'iji ya tụnyere, e nwere naanị otu mbugharị mbugharị maka Pinion P1.18, na nke ahụ bụ nkwụsị nkwụsị na Co-Motion.
O di nwute, agba olu a na-ebute olu na ntanye abuo na-ejedebe ihe 9! Sistemụ gia nwere usoro na ọghọm n'ụzọ doro anya, yabụ n'ikpeazụ ị ga-agafe isiokwu a wee tụọ usoro metụtara gị kachasị mkpa. Maka nhazi ngwa ngwa ma dị mfe karị, Rohloff bụ n'ezie nhọrọ kachasị adọrọ mmasị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọọ ogwe osisi. Maka iru igwe kwụ otu ebe, ị ga-achọ Piniongearbox.
Ma ọ bụghị ya, ọ nweghị onye mmeri doro anya ebe a. Usoro sistemụ abụọ ahụ na-enye draịva dị anya a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu ma na-eme ihe n'eziokwu, ma ọrụaka dị ịtụnanya nke ụwa ịgba ịnyịnya! Mee ka m mara na ihe ndị dị n'okpuru ebe ụdị gearbox ga-adabara gị nke ọma. Ọzọkwa, tụlee ịkwado ọrụ m na Patreon! Won't gaghị ahụ ọdịnaya na ọkwa a nke nkọwa ebe ọ bụla ọzọ na ịntanetị, yabụ ịkwado nke a bụ ozi mara mma.
Ogologo oge ole ka igwe kwụ otu ebe na-adịgide?
Belt draịvanwere ikeikpeazụ10,000-20,000 kilomita tupu ha achọ ka edochi ha. Otu ụzọ isi gbatịkwuo ndụ nke ụgbọala gị bụ ịgbanwe agbụ na narị kilomita ise ọ bụla. Ridfọdụ ndị na-agba ịnyịnya nwere agbụ 4 ha na-agbagharị n'etiti.Eprel 20 2020
Ngwurugwu belt dị mma karịa agbụ?
Ọ bụrụ na ịgbanyelarị crank na abeltụgbọalaigwe kwụ otu ebe, ị ga-achọpụtala na ha adịghị atụ ogho dị ka nnwere onwe dị kayinyeụgbọalaanyịnya igwe.Eririenye a ole na ole mma uru n'eluagbụ: ogologo ndụ (30,000km!), ogologo na-enweghị ụgbọala ụgbọala (enweghị lubema ọ bụdegreaser), ime ihe n'olu na idi obere.Dec 24 2019
Enwere m ike ịgbanwe igwe kwụ otu ebe m na eriri ụgbọala?
Ohaneze mba, maka naanị ihe kpatara na n'adịghị ka agbụeririna-aga n'ihu manwere ike'a ga-kewaa, ya merebelt mbanye anyịnya igwemkpakagbawara n'etiti ma ọ bụ oche na-anọ, ma ọ bụkanke mbughariỌgọst 16 2019
Ego ole ka ụlọ ọrụ Rohloff na-efu?
E nweghị iti gburugburu ọhịa ebe a -Hlọ ọrụ Rohloffdị oke ọnụ. Tụọ anya ịkwụ ụgwọ US $ 1600 ma ọ bụ 1100 € naanị makaehiwena shifter (igwe kwụ otu ebe zuru ezu na-amalite na 2500 €). Ikwesiri itinye aka naegonke ohuru ohuru na-ewu kwa.19.09.2018
Afọ ole ka eriri Harley ga-akwụsị?
“Ọnọdụ kacha mma ka anyị hụworoeriri ikpeazụ100,000 kilomita, ”ka Martin Ginns na-ekwu,Harley-Davidsononye njikwa azụmaahịa ọrụ.
ịkwakọrọ igwe kwụ otu ebe
Kedu ihe kpatara eji eji akwa kama ị nweta belt?
.B.yinyeụgbọalaejia na-aga n'ihu akaghị nke metal njikọ, ebe abeltụgbọalaejia akaghị nke roba na-agbanwe agbanwe (ugboro ugboro na ike ike ọdụdọ ma ọ bụ metal n'ime) Ayinyembanye chọrọ usoro mmanu mmanu. Abeltdraịva adịghị. Ayinyembanye na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti ntinye na mbugharị.
Kedu ụdị eriri belt na-ebu ịnyịnya ígwè na-eji?
Bgbọ ịnyịnya ígwè na-eji belt polyurethane ma ọ bụ eriri carbon na-eme ka ụgbọala na-adọkpụ kama nke ígwè ígwè ọdịnala. Nke a na-enye ọtụtụ elele, ọkachasị igwe nhicha, igwe dị jụụ nke chọrọ obere mmezi.
Gates eriri ụgbọala ọ bụ ezigbo ụgbọ okporo ígwè?
Obi abụọ adịghị ya na Gates Carbon Belt Drive bụ ihe ngwọta draịntị magburu onwe ya maka igwe kwụ otu ebe dị anya. Enweela m eriri ụgbọala na-agagharịgharị igwe elegharị anya NA eriri ụgbọala na-adọba ụgbọala na ọdụ m na-arụzi ụgbọala nke ha abụọ nwere 30,000km + na eriri mbụ ha. Iji mee ka nke ahụ pụta ìhè, ọkọlọtọ derailleur drivetrain agaghị agbanwe nke ọma mgbe 10,000km.
Ntugharị Gates belt na-agagharị igwe kwụ otu ebe nkịtị?
Tụkwasị na nke ahụ, ụgbọ ịnyịnya ígwè na-agagharị agagharị na-agbachi nkịtị ma chọọ ka ọ bụrụ na ọ dịghị mmezi ọ bụla ọzọ na-adịghị ọcha dị ọcha site na ntacha eze. Ka m na-enweta ọtụtụ arịrịọ site n'aka ndị mmadụ banyere igwe kwụ otu ebe na nhọrọ etiti dị maka Gates Carbon Drive, atụkọtara m akụ na ndị nrụpụta ịchọrọ ịma.